Warbaahinta Bulshada ee Bilaabidda: Bilaabidda, Qaybinta, Buzz iyo Bucks | Martech Zone
Waxaan wadaagnay liis quruxsan oo dhameystiran 40 + goobood si kor loogu qaado bilowgaaga waa inaad iska hubisaa (oo aad iska hubisaa) maadaama aad qorsheyneyso bilowga bilowgaaga.
Weli waxaa jira guux badan oo ku saabsan adeegsiga warbaahinta bulshada si aad wax uga ogaato bilowgaaga. Oo waxaa weli jira fikrado aad u xiiso badan oo asal ah oo la adeegsanayo. Tani infographic ka socda Udemy waxay muujineysaa sida adiga - bilow ahaan - aad uga faa'iideysan karto suuqgeynta warbaahinta bulshada inay tahay aalad aad ku kobciso ganacsigaaga iyo sababta aad ugu baahan karto inaad maal gashato qaar ka mid ah baraha baraha bulshada si aad xawaare ugu hesho.
Hal fure ayaa halkan ka maqan hordhaca. Haddii aad suuqgeynayso bilowgaaga adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada, runtii waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad haysato barnaamij horudhac ah oo lala yeelanayo dadka isticmaala beta si ay uga caawiyaan labadaba dhisida buzz agagaarahaaga iyo sidoo kale inaad hesho jawaab celin aan caadi ahayn.
Waanu ka shaqaynaynay Wareeg Press mudo sanad ah hadana wali waa bilaw dhalinyaro inkasta oo ay jiraan in ka badan 1,500 oo rakib. Jawaab celinta aan ka helayno dadka isticmaala waa mid la yaab leh waxaanan sii wadeynaa hagaajinta adeegga, kor u qaadista kaabayaasha iyo u diyaargarowga bilow aad u ballaaran. Si kastaba ha noqotee, ma dooneyno inaan hoos u dhigno tan iyo waqti iyo lacag bilowga ah illaa aan ka ogaanno in adeeggu uu yahay mid ku habboon - marka loo eego khibradaha isticmaalaha iyo kaabayaasha.
Mid ka mid ah furayaasha waaweyn ee ay ku dhex milmayaan waa dhageysiga jawaab celinta aad ka heleyso barxaddaada. Waxaan badanaaba aragnaa kala-go'id u dhexeeya waxa bilowguhu moodayo inay sameeyaan iyo waxa adeegsadayaashu ku qaddariyaan inay sameeyaan. Diirad saarista faa'iidooyinka ay isticmaaleyaashaadu siinayaan jawaab celinta ayaa ah hab fiican oo lagu caddeeyo nooca aad nolosha ku soo qaadaneyso.
Talada ugu dambeysa ayaa ah in la hubiyo inaad haysato u doodid ama barnaamij gacansaar ah si aad u faafiso, waxa loogu yeero infographic, ereyga guji. Bilaabasho badan ayaa u aragta kuwa sidii wax la qaban lahaa ka dib bilaabista, laakiin waxaan runtii ku riixnaa in macaamiisheennu ay u sameeyaan qayb ka mid ah bilowga. Dhisidda qaar badan oo ka mid ah aaladahaas dambe way adag tahay, gaar ahaan haddii ay u baahan yihiin in lagu daro barnaamijkaaga aasaasiga ah.
Tags: buzzbaraha bulshadabeddelka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada bilowgaqaybinta bilowgabilaabida xawaaladahasuuq geyn bilow ahUdemy
Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Casriyayso Kaarkaaga Kusocdo EMV